Home Siyaasadda Dowladda Hirshabelle oo magaacaabi rabto wasiiro cussub Maalmaha soo aaddan .
Mogadishu (Radio Halgan) Wararka aan ka heleeyno Magaalada Muqdishu ayaa tibaxaya in ku dhow labba Sano wax talaabba ah muusan qaaddin madaxweyne Mudane Cali Guudlaawe sababa jirro awgeed sida Doorashada Aqalka Sare iyo Golaha shacabka,balse hadda waxaa lasoo gaarray waqtigii uu dhaqaaqi lahaa Dowladda Hirshabelle madaama xal lagga gaarray qilaafkii soo jiitamaay waqtigii dheeraa.
Madaxweyne Cali Hussein Guudlaawe oo safar shaqo ah uggu maqnaa Dalka Turkey-ga ayaa dib uggu soo laabtay Soomaaliya ee Mogadishu kanna qeyb gallay caleemma Saarka Madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda Federalka Somalia Hassan Sheikh Mohamud unna gudbi doonno caasimadda Hirshabelle Jowhar maalinta Sabdiga ah oo aay ka dhimantahay berito oo keliya.
Sidda Radio Halgan xog laggu kalsoonaan karro uu ku hellay waxaa lamagacaabayaa wasiiro baddan in kastoo qaar ka mid ah wasiiradda hadda xillalka haayo halkoodda laggu dhaafi doonno balse 80% hawadda laggu cunni doonno.
Beesha Xawaadle waxa aay hilli doonnaan shan wasiir A iyo B iskuggu jirro.
1: Wasaradda arimaha gudaha
2: Wasaaradda Ganacsiga
3: Wasaaradda Mareynta iyo musiibooyinka
4: Wasaaradda Waxbarashadda
5: Wasaaradda Duulista iyo hawadda.
Waxaan soo gudbin doonnaa sidda beesha Xawaadle u kalla qaadan doonnaan balse wasaaradda aan helnay cidda qaadaneyso waa waxaasaradda Arrimaha Gudaha oo aay qaadanayaan Cabdalla Samatalis sida Radio Halgan u Xaqiijiyeen qar ka Mid Xildhibaanada Baarlamaanka Hir-Shabeelle
Waxii warar ah oo ku soo kordho kala socda marwalba Ish wararka Radio Halgan Mahadsanidiin
Previous articleXildhibaan Sanbaloolshe oo hartaallo afar qodob oo aad muhiim u ah.
Next articleRaysal wasaare Abiy Axmed ayaa booqasho ku gaadhay dalka Jabuuti.
Gudoomiye cusub oo loo magacaabay degmada Afgooye
Madaxa Booliska Soomaaliya,ayaa booqasho kuyimid Itoobiya.
DEG-DEG:-Shirkii ceergaabo ee beesha warsangali iyo maamulka somaliland oo bur buray...